Wakaaladaha Biyaha Somaliland iyo Ururrada Isticmaalayaasha oo Kulan ku Yeeshay Hargeysa – Hargeisa Water Agency
Wakaaladaha Biyaha Somaliland iyo Ururrada Isticmaalayaasha oo Kulan ku Yeeshay Hargeysa
Hargeysa (HWA)- Kulan aqoon-iswaydaarsi ah oo kor loogu qaadayo iskaashiga iyo wada-shaqeynta u dhexeeya adeeg bixiyeyaasha wakaaladaha biyaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo urrurada isticmaalayaasha biyaha, ayaa 10/May/2016 ka furmay hudheelka Maansoor ee magaalada Hargeysa.
Kulankan oo socon doona muddo laba maalmood ah, isla markaana soo xidhmi doona Arbacada 11/May/2016, waxa wada fulinaya Wakaaladda Biyaha Hargeysa iyo Wasaaradda Khayraadka Biyaha Somaliland, waxa qeybgalay maareeyeyaasha wakaaladaha biyaha ee Hargeysa, Burco, Boorama, Ceerigaabo, Wajaale, ururrada biyo isticmaalayaasha ee dhammaan wakaaladahaas, hay’adaha UN HABITAT, UNICEF, TS iyo madax ka socda Wakaaladda Biyaha ee dalka Uganda ee bariga qaaradda Afrika.
Kulankan oo ay ka hadleen Ku-simaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Khayraadka Biyaha Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cumar Faarax, Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahim Siyaad Yoonis, Mr. Marco Vander Plas oo ka socda UN HABITAT, Sahr M. Kemoh oo ka socotay UNICEF WASH iyo masuuliyiin kale, ayaa lagu lafo-guri doonaa qaabka ugu habboon ee loo hagaajin lahaa, isla markaana loo dabbooli lahaa baahiyaha biyaha ee isticmaalayaasha loogu adeego iyo xoojinta xidhiidhka ka dhexeeya Wakaalladaha Biyaha dalka, kuwaas oo ka qeybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa’iideystaan muddada oo socdo.
Shir-hawleedkan oo lagu lafo-gurayo qaabka ugu habboon ee loo hagaajin lahaa, loona dabooli lahaa baahiyaha ee loogu adeego dadweynaha iyo xidhiidhka ka dhexeeya wakaaladaha Biyaha dalka, ayaa lagaga hadlay faa’iidada uu leeyahay adeeg-bixiyeyaasha.
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Mr. Ibraahim Siyaad Yoonis oo furay shirkan, ayaa ka warbixiyey faa’iidada ay leedahay in si wadajir ah loo shaqeeyo iyo in la iska kaashado dhinaca biyaha.
“Qeybo idin ka mid ah waxay tababar ugu baxeen waddanka Uganda, markast oo aynu wax soo baranno ama halkan aynu ku baranno amma dibedaha ku soo baranee waa inaynu magaalooyinkeenna iyo dadkeenna ugu shaqayno, waayo aqoonteennu meel ayey gaadhsiisan tahay, khibradduna waa qofku inta uu shaqeeyey. Imminka Uganda oo kale Wakaaladda Biyaha, waa waddamada ugu fiican xagga maamulka iyo biyo qeybteedaba, waayo shirar badan baannu isugu nimi,” ayuu yidhi Mr. Yoonis.
Kulankan oo la filayo in gunaanadkiisa laga soo saaro tallaabooyin la xidhiidha sidii loo dabooli lahaa baahiyaha la xidhiidha adeegyada dadweynaha loo qabto iyo xidhiidhka ka dhexeeya wakaaladaha Biyaha dalka, loona hagaajin lahaa urrurada isticmaalayaasha biyo, iyadoo kulan yahay mid muhiim u ah iskaashiga wakaaladaha biyaha ee Somaliland.